Hevitra MPANOHARIANA | 155
Soloky mihamahazo laka
2007-05-18 @ 17:08 in Andavanandro
Resaka andavanandro eto Iarivo ihany ity lazaiko etoana ity. Maro karazana ny soloky fandre sy fahitantsika fa misy endrika mbola tsy fandreko loatra no holazaiko eto izao. Ity dia tsy maintsy misy namana ny mpanao azy ary ny mpivarotra ihany no tena asiany voalohany.
Eto amintsika moa dia atao hoe tsy ampy loatra ny vola madinika hany ka any am-pivarotana no manakalo vola ny sarambambem-bahoaka. Eo amin’izay no idiran-dry zalahy amin’ny solokiny. Mody manakalo vola tokoa ry zalahy. Amin’ny ankapobeny dia vola vaventy hatrany no entina. Ny tena fanaony aza moa dia ny Ar10.000 no tiany atakalo ho roa fotsiny izany hoe Ar5000 roa no tadiaviny. Matetika dia tsy manome olana amin’izany loatra ny mpivarotra rehefa hitany fa tena vola io vola atakalo io.
Fa eo indrindra no ivoahan’ny haratsian-dohany. Olona roa hatrany no mifanakaiky eo, ny iray no mitondra ny vola atakalo moa ny iray tahaka ireny olona tsy fantany ireny na manao zavatra hafa « donendrinendrina » mitakisikisina amin’ilay namany eny. Raha vao manakalo (na mamerimbola be ihany koa !) ilay mpivarotra dia vetivety ny vaventy iray dia ifanakalozan’izy mirahalahy eo (efa nianarana mihitsy !). Tonga dia miteny ilay ranamana manakalo vola avy eo hoe mbola tsy ampy ity vola nomenao ity. Raha tsy efa mailo na efa tratra indray mandeha tsy mahita ny fanaovana azy.
Fanaon’ny efa zatra ny miteny hatrany hoe Ar10.000 ity volanareo ity an ! sady mipetraka eo ambony latabatra ifanatrehana ihany ny vola. Dia miteny indray avy eo hoe ireto Ar5000 roa ary takalony. Tsy mahita holazaina ry zareo amin’izay fotoana izay. Izay ny traikefa mahazatra fa mety mbola hitohy ny raharaha amin’ny sasany.
Mody miamboho kely ny mpivarotra indray izy. Eo anelanelan’izay fotoana izay indray efa niova vola sandoka mandehandeha be eto amin’ny tanàna ny iray amin’ny vola vao natakalo teo. Dia mody mitodika indray izy manao hoe aleo atao tokana ihany fa manahirana izy izany…amin’io fotoana io dia tsy mandray ny vola intsony ny mpivarotra fa mamaly hoe rehefa nanakalo ianareo dia tsy misy averina izany intsony fa ento any iny. Raha mandray manko ka miteny ny mpivarotra avy eo hoe tsy izy ity vola ity dia hamaly izy hoe iny ihany ny vola nomenao teo koa inona indray. Mety ho sarotra ho an’ny mpivarotra ny hamaly azy amin’izay fotoana izay ka ny tsy manaiky ny hamerenana ihany no fanafodiny.
Zavatra mety ho tsotsotra ihany izay nambarako izay nefa noho ny fahitako ilay mpangataka isan’alahady eo ambavahadim-piangonana mamolava izay lasa naman-dry zalahy mpisoloky ireto no nanoratako azy etoana. Mety ho lamaody manko ny fanaovana ity soloky mbola tsy fandre loatra ity izay mety ho efa tany an-tsain’ny mpanao ilay fandaharana « Aleo hihomehezana fotsiny » ( inona ary izany?) amin’ny teny frantsay izay mamandrika any Quebec matetika afaka kelikely eo !
2007-05-17 @ 09:35 in Kolontsaina
Asa raha tadidinareo ilay fanaovam-pahatsiarovana an’i Ravinala iny. Asa na fifanandrifian-javatra na mpamaky ity blaogy ity ny mpitantana ao fa vao nanoratra iny aho, ny ampitso ihany dia nanjary nisy soratra hoe « bientôt chez vous » teo amin’ny fijerena azy teo aloha. Omaly raha tonga tao an-trano aho dia nandefa horonantsarimihetsika indray izy sady misy soratra hoe J-10. Azo heverina avy hatrany fa afaka folo andro omaly no handeha indray ilay haino aman-jery.
Tsy mbola nilaza ny anarany izy ao fa taiza kosa no nahitako ny anarany ? Dokambarotra eny amin’ny arabe amin’ireny tabilao lehibe ireny : Sarina tranoavo alaina sary avy aty ambany ka toy ny fotony ny sary tanana maromaro toy ireny mankalaza amin’ny fivavahana ireny. Mampahatsiahy sary avy hatrany rehefa mpamaky ny bokin’ny antokom-pivavahana sasany : Mankalaza an’i Babela ve ? Babela ilay malaza ao amin’ny baiboly ho nananganan’ny olona tilikambo avo manambara ny asan’olombelona sy fitadiavany rehareha.
Nefa sary nitsipelika tao anaty fotsiny iny fa tsy inona tsy akory. Viva no anarana lehibe napetrany teo ambony miaraka amin’ny tarigetra manao hoe « vivez l’evenement chez vous » ! Ra-vina-la izany no lasa Viva Amin’ny 26 mey izany mijery na tonga tokoa izy na tsia !
«Mialoha 1 2 3 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 160 161 162 Manaraka»